Halkee ayuu Guddoomiye ka ahaa Horjoogihii Al-shabaab ee maanta isku soo dhiibay DFS? - Hablaha Media Network
Halkee ayuu Guddoomiye ka ahaa Horjoogihii Al-shabaab ee maanta isku soo dhiibay DFS?
HMN:- Wararka laga helayo magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo ayaa sheegaya in ciidamada halkaa ku sugan uu maanta isku soo dhiibay Horjooge ka tirsan Al-shabaab.
Ciidamada oo xiligaa ku guda jiray shaqooyinkooda ayaa waxaa usoo goostay Guddoomiyihii Al-shabaab ugu magacownaa Degaanka Ceel-gaduud ee Gobolka Gedo Maxamed Yuusuf Dheel.
Ciidamada oo ka dhabeynaaya ballanqaadka Madaxweynaha dalka Maxamed C/llahi Farmaajo, ayaa Horjoogahaasi geeyay Saldhiga Dhexe ee Degmada Garbahaarey, si uu halkaa ugu helo amni mudada uu ku jiro gacanta maamulka Gedo.
Saraakiisha ciidamada maamulka ayaa Horjoogahaani lagu magacaabo Maxamed Yuusuf Dheel weydiinaaya su’aalo la xiriira la joogitaankiisa hore ee Al-shabaab.
Maamulka Gobolka ayaa lagu wadaa in Horjooge Maxamed Yuusuf Dheel ay usoo gacan galiyaan dowlada Federaalka ah ee Somalia.
Geesta kale, Saraakiisha ciidamada Garbahaarey ayaan weli ka hadal Horjoogaha ka tirsan Al-shabaab ee maanta isku soo dhiibay.